I-China LH-BM220L 1-3 Izendlalelo Eziphindwe Kabili Indandatho Yekhemikhali Ivuthela Umshini Wokubumba Ukukhiqiza kanye Nemboni |IsiLuhong
I-LH-BM220L 1-3 Izendlalelo Eziphindwe Kabili Umshini Wokubumba Wekhemikhali Wokuvuthela
Umshini wokubumba wekhemikhali we-220L wendandatho ephindwe kabili ungakhiqiza izigubhu zamakhemikhali ze-PE&HDPE ukusuka ku-200L kuya ku-220L, ama-1-3layers.
Igama Brand: Luhong
Ichweba: Qingdao Port
Isikhathi Sokulethwa: Izinsuku ezingama-60-90
Isikhathi Sokukhokha:30% inkokhelo ye-adavance nge-T/T, imali esele izokhokhwa nge-T/T noma i-L/C ngaphambi kokulethwa.
1.Imininingwane yomshini wokubumba we-Double Ring Chemical Drum Blow
I-Extrusion motor kanye nebhokisi legiya linikeza amandla esikulufu.Ngaleso sikhathi isikulufu kanye nomgqomo onezinto eziqinile qinisekisa ukuthi wenza ipulasitiki kahle impahla yepulasitiki, isifudumezi se-ceramic esinomsebenzi wokushisa olinganayo futhi osheshayo!
Uhlobo oluqongelelayo, ukukhishwa kwempahla ngendlela yokuqala kokuphuma kuqala.Isakhiwo sekhanda siklanywe unjiniyela wethu ochwepheshe, ukugeleza kuzinzile futhi kuyashesha.Sebenzisa isilawuli se-parison ukuze ulawule ukujiya kwama-jerrycans, ukuze uqinisekise umfaniswano wokujiya.Ngaphandle kwalokho, futhi singalungisa ububanzi bokujiya ngenguqulo yokusebenza yesilawuli!
Ine-clamping plate nesilinda, igayidi yomugqa, isilayidi, i-transducer...
Isikhunta sigxilile epuletini.Zonke izingxenye ziqinisekisa ukunemba kokunyakaza kwemishini, kuzinzile futhi kuyashesha!
Inesikrini sokuthinta esisebenzayo, i-PLC, ukushintsha kothintana naye, ukushintshwa komoya, ukubambezeleka, amandla kagesi azinzile, isiguquli njll. Singafaka, siguqule futhi siqaphe ipharamitha yokushisisa, ukucindezela, isikhathi, i-alamu... ukuze silawule isenzo somshini wonke isikrini sokuthinta.Inezilimi ezimbili zokusebenza, isiShayina nesiNgisi!
Ine-hydraulic servo motor kanye nephampu, i-valve, ipompo, ithangi likawoyela, isipholile sikawoyela, ishubhu... Nikeza amandla okusebenza ngomshini, okwamanje i-valve elinganayo ilawulwa ukucindezela kokugeleza kukawoyela ukuze kudluliselwe isignali yedijithali esenzweni somshini, ukulawula isenzo shaya iphinikhodi, ukwakheka kwe-clamping, ikhanda kanye ne-extrusion!
2.LH-BM220L Vuthela Umshini Wokubumba Imicikilisho Yezobuchwepheshe
Ubukhulu bebonke L*W*H
I-Screw Diameter Eyinhloko
I-Max Extruder Output
I-Platform Lifting Stroke
Ukuphakamisa Amandla Emoto
16KG (Ngokwesisindo somkhiqizo)
Ngokuvumelana nomthamo womkhiqizo
I-Parison Thickness Lungisa
Moog 100 Amaphuzu
Isikhunta Plate Usayizi
Isikhunta Plate Space
I-Oil Tank Volume
Umfutho Wamanzi Osenziwe Kabusha
Inani Lamanzi Agaywe Kabusha
Okwedlule: I-LH-BM10000L 1-6 Izendlalelo Umshini Wokubumba Ithangi Lamanzi
Olandelayo: LH-BM1000L 1-3 Izendlalelo I-IBC Tank Blow Molding Machine